Dhimma Qabsoo Oromoo Irratti Oduuwwan Social Media – Ayyaantuu Online
HomeAfaan OromooDhimma Qabsoo Oromoo Irratti Oduuwwan Social Media
Dhimma Qabsoo Oromoo Irratti Oduuwwan Social Media
Dhimma Qabsoo Oromoo Irratti Oduuwwan Social Media Irraa – Caamsaa 14, 2020
Caalaa Daggafaa Warra Galaan
WAAMICHA AARTISTOOTA OROMOOF!
Seenaa uummata oromoo keessatti aartistoonni oromoo aarsaa guddaa kaffalaniiru.
Hawwisoo afran qalloo kaasee hanga ammaatti,xiyyeeffannoon aartistoota keenyaa,roorroof, cunqursaa uummata keenya irra gahu kan calaqqisiisudha.Bara uummanni keenya carraa miidiyaa dhabetti,bara hayyoonnii fi dhaabbileen oromoo mogoleen laafetti; motora ta’ee, kan uummata sochoosaa ture; keessattuu, gama walleetiin;Alii Birraa, Alii Shabboo, Halloo Daawwee, Nuhoo Goobanaa,Umar Suleeyman,lfinsh Qannoo, Eebbisaa Addunyaa, Usmaayyoo muusaa fi kannee biroo illee hedduu isaanii kaasuu ni dandeenya.
Garuu waanti garaa nama nyaatu,gochi aartistoonni oromoo muraasni, bara dhiyoo kana raawwachaa jiran, seenaa jarreen kanaatiin ala faallaadha.Bara jijjiiramaa ykn bara micciiramaa jedhan, kana keessa aartistoonni keenya hangi muraasni; daldala siyaasa mootummaa bilxiginnaa keessa seenanii, Aartii oromoo keessatti seenaa gurraacha galmeessaa jiru.
Yeroo hedduudhaaf, tokkummaa uummata oromoo fi seenaa aartii oromootiif, gaarii miti, jennee callisnus, jarreen kun of deebisuu hin dandeenye.Ummanni garuu kan beekuu qabu,qabsoo isaa qaama wayiitti hirkisee,qaama sana irraa kan bilisummaa isaa eegu, osoo hin taane, ofii isaatii wal sochoosee falmachuu qaba.
Ani akka nama aartii keessa jiruutti, dirqama gama aartiitiin narraa eegamu,bahaan jira. Gara fuula duraatti illee waan ogummichi narraa barbaadu raawwachuuf qophiidha.
Seenaa aartistoota Usmaayyoo Muusaa, Eebbisaa Addunyaa faarsaa, gochaan faallaa kanaa dhaabbachuun diinummaadha.
Aartistoonni oromoo kaleessa seenaa gaarii qabdan; har’a immoo bilxiginnaan lafaa, konkolaataa fi koondoominiyeemiin isin liqimsite.Fudhachuun rakkoo miti.gara uummata keessaniitti deebitanii akka sagalee saba keessanii taatan;kabajaan waamicha isinii dhiyeesseera.Waamicha uummata keessanii dhageessanii akka deebitan abdiin qaba.
Kaayyoo sabaa faayidaa dhuunfaan dagachuun diinummaadha.Osoo Nuhoon Goobanaa rakkatuu, Halloo Daawwee rakkattuu, Osoo faffacaaneen, mana ona keessatti beela’uu, osoo aartistoonni nu dura jiran,barbaacha dhabanii dagatamanii jiranii, gargaarsi aartistoota fayidaaf fiiganii godhamu daldala siyaasaati.waggaa lamaa asitti OPDO durii fi bilxiginnaan ammaa haala duraan hin baratamneen aartistoota oromoo keessa harka galfataniiru.
Kana baraaruuf immoo uummatatti beeksiisuun dirqama waan ta’eefan barreesse.
Dogoggorri yoo jiraate; na sirreessaa.
#OSOO NUTI JIRRUU; AARTIIN OROMOO SEENAA GURRAACHAAN HIN GAL’MAA’U.
Duulli ijiibbaataa WBO sakaatta’uu dahoo jedhuun adeemaa jiruu oromoo sirna waggaa 60 turee jalaatti deebisuufi malee akeeka biraa akka hin qabnee hubaadhaa.
Kanaas kan godhaan tumsa waloo biyyoota ganfaa afrikaa dantaa waliif eeguu danda’anii waliin tahuuniidha. Biyyoonni kuniis ertiraaf itoophiyaa suudan yoo tahaan ammaatti suudaniif Itoophiyaa mufii walirraa qabaataniis ertiraaf Itoophiyaan harkaaf guant tahuun oromummaa irraatti duula labsaa jiruu.
Humna hiree oromoo ukkaamsuun egeree oromoo fi oromiyaa dukkaneessuuf wal tahee kana oromoonis eenyummaa isaa baraaruuf kutaan amantaan dhaaba siyaasaan, ayidoolojii hordofuun osoo wal hin qoodiin tokkummaa bahee, oromummaa gidduu gala godhachuun falmii hadhaawaa gaggeessuu qaba. Kanaaf caasaa Qeerroo Bilisummaa Oromoo, hawaasa oromoo hunduu, murnii hawaasa oromoo jaarmiyaa adda addaa jalaatti ijaaramanii fi kkf dammaquun sochiitti seenuun dirqaama keenyadha. Fincila xumuraa kan PPn kuftuu ykn kan nutii itriin xumurruu gaggeessuuf of qopheessuu sabaas qopheessuu qabna. Amma WBOn gaafa Oraaliin reeffa lakkoofsisuu mitii gaafa rasaasan harcaanee diinni nagaan jiraattuyyuu falmii hadhaawaa gaggeessaa turree. Kanaaf nurraa hin hafiinaa walirraa hin hafnuun dhaamsa kiyyaa
Jaawwii Jiillee irraa.
Warraaqsaatti seennee mirga keenya kabaachiifatuun dirqaama waan taheef akka aadaa qabsootti tokkummaan hiriiruun diina keenya dura dhaabbachuun dirqama yeroon feetudha
Garboomfataan ni kufaa!
Bilisummaan qabsoon dhufa!
Sagalee Qeerroo Bilisummaa Oromoo, Caamasaa 13, 2020